အထွေထွေ – My Doctor
You are here:Home-All Articles-အထွေထွေရောဂါများ-အထွေထွေ
By tayzar|2019-09-23T15:38:22+00:00September 23rd, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
?အမာရွတ်ပျောက်ဆေးများအကြောင်း သိကောင်းစရာ? ဒဏ်ရာဆိုတာတွေက နာကျင်စရာတွေပေးသလိုပဲ အမာရွတ်တွေကတော့ အဲ့ဒီ့ နာကျင်စရာတွေကို ပြန်ပြောင်းသတိရစေနိုင်စွမ်းပါတယ်။ ဒီ့ထက်ပိုဆိုးတဲ့ အချက်ကတော့ အမာရွတ်ဆိုတာ ရှိတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီး အသားအရေ အလှအပကို အမြဲတိုက်ခိုက် ထိုးနှက်နေတတ်ပါတယ်။ အမာရွတ်မှန်ရင် ရာနှုန်းပြည့် လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ဒီအမာရွတ်တွေ လျော့ပါးသွားအောင် ၊ သိပ်ရုပ်မဆိုးအောင်၊ မမြင်သာ မသိသာအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ကုသနည်းတွေတော့ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်ကုသနည်းက အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာတော့ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမယ်။ ? Skin camouflage (make-up) အမာရွတ်ကို ဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ မသိသာအောင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ရေစိုခံမိတ်ကပ်တွေလိမ်းလို့ရပါတယ်။ ? Silicone gels
By tayzar|2019-09-23T15:15:39+00:00September 23rd, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
?ဝက်ခြံပျောက်ဆေးများအကြောင်း သိကောင်းစရာ? ဆဲလ်ဖီကင်မရာတွေ ၊ ဓာတ်ပုံ effects တွေ ဘယ်လောက်ကောင်းလာပြီပဲဆိုဆို လူဆိုတာ ပုံရိပ်ယောင်ကမ္ဘာထဲမှာပဲ နေရတာမှ မဟုတ်တာ။ ပြင်ပကမ္ဘာကြီးနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ အမြဲပြရမဲ့ မျက်နှာလေး မှာ အဖုအပိမ့်ကင်း ဝက်ခြံရှင်းပြီး လှပသန့်ပြန့်နေဖို့ လိုတာပေါ့။ ဝက်ခြံဖုတွေရဲ့ စိတ်ညစ်အောင်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကျအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းကို လျှော့တွက်လို့မရပါဘူး။ ဒီတော့ ဝက်ခြံပျောက်ဆေးတွေအကြောင်းကို နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ?ဝက်ခြံဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ ?? သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါသိမှ ဝက်ခြံပျောက်ဖို့နဲ့ မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ အဆင်ပြေမှာပါ။ မျက်နှာအရေပြားက သဘာဝအတိုင်းကြွေကျတဲ့ ဆဲလ်အသေတွေ၊ ချေးညှော်တွေ နဲ့ အရေပြားကထွက်တဲ့ အဆီတွေ ပေါင်းမိတဲ့အခါမှာ ချွေးပေါက်တွေကို သွားပိတ်စေပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အခါ ဝက်ခြံဆိုတဲ့
By tayzar|2019-09-20T00:09:01+00:00September 20th, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဗောက်ထတက်သူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်း ခုလိုစိုစွတ်တဲ့ မိုးရာသီ နှင့် အေးမြခြောက်သွေ့တဲ့ဆောင်းရာသီတွေမှာ ဆံကေသာတွေကြား ဗောက်ထတက်ပါတယ်။ မိမိခေါင်းမှာ ဗောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်း တော်တော်ကို နေရထိုင်ရ အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အရာပါ။ ခေါင်းဖြီးလိုက်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကုတ်လိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေကျနေတဲ့ ဖောက်ရောဂါ။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတော်တော်များများဟာ လူကြားထဲ သွားမယ်ဆိုရင်တောင် ခေါင်းမယားဖို့ ၊ ခေါင်းမကုတ်မိဖို့ကို ဆုတောင်းနေရတဲ့ ဘဝမျိုးကို ကြုံဖူးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိခေါင်းမှာ ဗောက်ရောဂါဖြစ်နေပြီဆိုရင် ဒီလိုနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်... (၁) ဗောက်ပျောက်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည် မိမိဦးရေပြားနဲ့ အဆင်ပြေမယ့် ဗောက်ပျောက်နိုင်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်မျိုးကို အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ် (၂) Green Tea ဗောက်အတွက်ဆိုရင် Green Tea ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်။
By tayzar|2019-09-17T20:53:08+00:00September 17th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
ညှင်းမပေါက်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ??? ကဲ ညှင်းမပေါက်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲတဲ့။ ညှင်းမပေါက်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရလဲဆိုတဲ့အခါ ညှင်းဟာ သဘာဝအတိုင်းလူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတတ်တဲ့မှိုအမျိုးအစားတစ်မျိုးဆိုတာသိထားရမယ်။ သဘာဝအတိုင်းရှိနေတတ်တာမို့ မကြာခဏဆိုသလိုလဲ ပြန်ပြန်ပြီးဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေအောင်အားပေးပြီဆိုရင်အချိန်မရွေးပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ညှင်း ခနခမပြန်မဖြစ်အောင် အောက်ပါအချက်များကိုလိုက်နာလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်... ၁)အဆီများတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းများကိုရှောင်ပါ။ ၂)နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကိုလျှော့ပါ။ နေရောင်ခြည်ဟာ ညှင်းကိုပိုမိုဆိုးဝါး၊ပိုမိုသိသာစေရုံသာမက ညှင်းဖြစ်ပေါ်ဖို့ကိုလဲအားပေးပါတယ်။ ၃)နေရောင်ခြည်ထဲအချိန်ကြာကြာထွက်ရမယ်ဆိုရင် မထွက်ခင်၂ရက်၃ရက်လောက်ကြိုပြီး မှိုရောဂါကိုနိုင်သောခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့်နေ့စဉ်ခေါင်းလျှော်ပေးပါ။ ၄)နေရောင်ကာကရင်မ်နေ့စဉ်လိမ်းပါ။ SPF-30 အနည်းဆုံးပါဝင်သော အဆီမများသည့်နေရောင်ကာလိမ်းဆေးများသုံးသင့်ပါတယ်။ ၅)ကျပ်လွန်းသောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ၆)ချွေးထွက်စွတ်စိုမှုနည်းစေရန် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော ချည်သားကဲ့သို့အဝတ်အထည်များကိုသာဝတ်ဆင်ပါ။ ၇)ပူနွေးစွတ်စိုတဲ့ရာသီဥတုများမှာ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြသပြီး ညှင်းကိုနိုင်သောဆေးဝါးများ(သောက်ဆေး၊လိမ်းဆေး၊ခေါင်းလျှော်ရည် စသည်)ကို တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်(သို့)နှစ်ကြိမ်ခန့် သုံးစွဲပေးပါက ညှင်းရောဂါမကြာခဏဖြစ်ခြင်းကိုအထိုက်အလျောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါအချက်ကလေးတွေကိုလိုက်နာပြီး ညှင်းကင်းစင်၍ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်သော အရေပြားအလှလေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ dr.ye'lwin mm
By tayzar|2019-09-17T20:48:53+00:00September 17th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
'ညှင်း' တဲ့ ပုံမှန်အရေပြားအရောင်မဟုတ်တဲ့ အကွက်အကွက်ကလေးတွေနဲ့ အရေပြားမှိုရောဂါတစ်မျိုး။ ဖြစ်တဲ့နေရာမှာသိသာထင်ရှားပြီး လူမြင်မတင့်တယ်သောရောဂါ။ပွေးလိုအရမ်းယားပြီးဒုက္ခမပေးပေမယ့် ဒီဟာကကျ လူမြင်လွယ်တဲ့နေရာတွေမှာအဖြစ်များလို့ လူကြားထဲသွားလာတော့ကျ ဒုက္ခရောက်ရတယ်။ မနာကျင်၊မကူးစက်နိုင်ပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်လေ့ရှိတာကြောင့် လူကြားထဲသွားလာရမှာမလုံမခြုံဖြစ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ညှင်းကိုနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေသုံးစွဲတာတောင်မှ အရေပြားအရောင်ဟာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့လပေါင်းများစွာကြာနေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ'ညှင်း'ဟာ လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအဖြစ်များတတ်လဲဆိုတာ ဒီနေ့ပြောပြပါမယ်။ ညှင်း ဘယ်နေရာတွေမှာအပေါက်များလဲ??? ညှင်းဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့လူငယ်တွေမှာအဖြစ်များပါတယ်။ အနည်းငယ်ယားနိုင်ပြီး အလွယ်တကူမကူးစက်နိုင်သော အရေပြားမှိုရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်ဟာ ညှင်းကိုပိုမိုသိသာထင်ရှားစေပါတယ်။ ပူနွေးစွတ်စိုတဲ့ ရာသီတွေမှာမကြာခဏပြန်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဆီပြန်တတ်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်များ၊ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲနှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကျနေသူများမှာလဲ မကြာမကြာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အောက်ပါနေရာတွေမှာအပေါက်များလေ့ရှိပါတယ်... ၁)ပခုံး ၂)ကျောပြင် ၃)ရင်ဘတ် ၄)လည်ပင်းနဲ့ ၅)လက်မောင်းအပေါ်ပိုင်းတွေမှာ အတွေ့များပါတယ်။ အဆိုပါနေရာတွေဟာ နေရောင်ခြည်အထိများတဲ့နေရာတွေလဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အသားအရေထက်ပိုမိုဖျော့သော(သို့)ပိုမိုရင့်သော အကွက်ကလေးတွေအနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားကွာခြင်း၊အနည်းငယ်ယားယံခြင်းများလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ပါနေရာတွေကတော့
By tayzar|2019-09-12T14:45:18+00:00September 12th, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အထွေထွေ|
စိတ်ဖိဆီးမှု၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ စိတ်ဖိဆီးမှု ကြားလိုက်တာနဲ့ ကောင်းတဲ့စကားလုံး မဟုတ်မှန်းတော့ လူတိုင်းသိလိုက်ကြမှာပါ။ ရုံးလောက၊ စီးပွားရေးလောကမှာလည်း "ငါ ခုတစ်လော စိတ်ဖိဆီးမှုတွေများနေတယ်" လို့ ဆိုပြီး ပြောဆိုနေကြတာ ခဏ ခဏ ကြားဖူးနေကျလည်း ဖြစ်မှာပါ။ စိတ်ဖိဆီးမှုဆိုတာ ကျင်လည်ရာ လူ့လောကမှာတော့ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ တစ်ခါမဟုတ် တစ်ခါ ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ မြန်မာ "စကားပုံမှာလည်း စိတ်ထောင်းလို့ ကိုယ်ကျေ" ဆိုတဲ့ စကားပုံ ရှိသလို ဘာဖြစ်ဖြစ် စိတ်က အဓိကပါပဲ စိတ်ဆောင်ရင် ရပါတယ်၊ စိတ်ရှိဖို့ပဲ လိုပါတယ်လို့ ပြောနေကြသံတွေလည်း ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ် တစ်ကယ်ပဲ စိတ်ဖိမှုကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာ
How to care after Chikungunya
By tayzar|2019-09-12T10:18:29+00:00September 12th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေကို ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်မလဲ ? နာမည်ကြီးပြီး မဖြစ်ဘူးရင်ပဲခေတ်မမီလောက်အောင် ဒီနှစ်မှာပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးရောဂါ။ပေါ်ပြူလာဖြစ်ဆို ထိမိတဲ့သူတိုင်း ပုံကိုကျရော။အဆစ်အမြစ်တွေကိုက်ချက်ဆိုတာ ပြောတောင်မပြတတ်ဘူးဆိုတာမျိုး။အဖျားကကျသွားရင်တောင် အဆစ်ကိုက်တာလေးက Extension ဆွဲသေးတာ။ဆွဲချက်ကလဲ လက်ရောခြေထောက်ရောလန်ပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိ်ုယ်မရပ်နိုင်တဲ့အဖြစ်၊ရေသောက်ဖို့တောင်လက်မမြှောက်နိုင်လောက်အောင်အထိ။ဟုတ်ပါတယ်၊၂၀၁၉ခုနှစ်ရဲ့ အကယ်ဒမီဆုရှင် ဆင်တုပ်ကွေးပါ။ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရော၊ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပါ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ကိုက်ခဲခြင်းတွေဟာ သာမန်တုပ်ကွေးနဲ့မတူပဲအတော့်ကို ပြင်းထန်လွန်းလှပါတယ်။ ဒီတော့ ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီးကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေသက်သာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ??? အောက်မှာပြောပြပေးထားတာလေးတွေကို တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပါ- ၁။ပါရာစီတမော။ -ပါရာစီတမောကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားဖျားနာသက်သာတဲ့ဆေးပါ။ -ပါရာစီတမောကို တစ်ရက်လျှင် ၅၀၀(သို့)၇၅၀ မီလီဂရမ်ကို (၆)နာရီခြားတစ်ကြိမ်သောက်ပေးနိုင်ပါတယ်(ပါရာစီတမောနှင့်မတည့်တဲ့လူနာ၊အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးသူနဲ့အသည်းရောဂါရှိသူတွေမှာတော့ ဆရာဝန်နှင့်ပြသပြီးမှသောက်သင့်ပါတယ်) -ပါရာစီတမောကို တစ်ရက်လျှင် (၄၀၀၀)မီလီဂရမ်ထက် ပိုမသောက်သင့်ပါဘူး၊အသည်းအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။ -၎င်းကိုတော့ အလွန်မပြင်းထန်သော ကိုက်ခဲနာကျင်မှုတွေမှာသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ၂။အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ။ -အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများဟာလဲ ဈေးကွက်ထဲမှာမြောက်များစွာရှိနေပါတယ်။ -ဒီထဲကမှ ဥပမာအနေနဲ့ Ibuprofen
When mother is fever
By tayzar|2019-09-12T10:07:49+00:00September 12th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
နို့တိုက်မေမေတို့ဖျားတဲ့အခါ??? ရင်သွေးငယ်ကလေးများကို နေ့စဉ်မပြတ်စောင့်ရှောက်နေရသောနို့တိုက်မိခင်တို့ဖျားနာတဲ့အခါမှာ ကလေးကိုကူးမှာစသဖြင့် အစိုးရိမ်လွန်ကဲကာ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်နို့တိုက်မိခင်တို့ ပူပန်မလွန်ရအောင် မေမေတို့ဖျားနာတဲ့အခါဘာတွေဆောင်ရ၊ရှောင်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ နို့တိုက်မေမေတို့ဖျားတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ??? ၁။မိခင်နို့ကိုဆက်တိုက်ပါ။ မိခင်ဖျားနာနေသော်လည်း မိခင်နို့မှာပါတဲ့အာဟာရနဲ့ ပဋိပစ္စည်းတွေဟာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မေမေတို့ဖျားနေသော်လည်း နို့ချိုကိုဆက်လက်တိုက်ကျွေးပေးပါ။ အကယ်၍မိမိမှာနို့မတိုက်နိုင်အောင်ဖျားနာနေပါက နို့ကိုနို့ဘူးထဲသို့ညှစ်၍တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၂။မေမေတို့နှာချေ ချောင်းဆိုးလျှင်လက်ကိုင်ပဝါသုံးပါ၊လက်ကိုမကြာခနဆေးပေးပါ။ ကလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ(နို့ဘူး၊ရေခွက် စသည်)တို့ကို နေ့စဉ်ဆေးကြောပါ။ မိခင်တို့အသုံးပြုသောလက်ကိုင်ပဝါ၊အဝတ်အစားများကို သေချာစွာလျှော်ဖွတ်ပါ။ ၃။အိမ်မှာရှိသောစားပွဲ၊ကုလားထိုင်၊ပန်းကန်ခွက်ယောက်များတွင် မိမိနှာချေ၊ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ ရောဂါပိုးမွှားများကပ်တင်နေနိုင်သောကြောင့် နေ့စဉ်ဆေးကြောသန့်စင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ၄။အဖျားကျဆေး၊ပိုးသတ်ဆေးအချို့ဟာ ကလေးငယ်အတွက်ရော၊နို့တိုက်မိခင်အတွက်ပါ အဆင်မပြေတာ၊မသင့်တော်တာတွေရှိတာကြောင့် ဆရာဝန်နှင့်ပြသပြီးမှသောက်သင့်ပါတယ်။ ၅။ကိုက်ခဲဖျားနာဆေးများအနေနဲ့ Biogesic လို ပါရာစီတမောဟာတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာရော၊နို့တိုက်ချိန်မှာပါ အလုံခြုံစိတ်အချရဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ ထိုမှမသက်သာပါက နီးစပ်ရာဆရာဝန်နှင့်ပြသပြီးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
By tayzar|2019-09-12T09:32:21+00:00September 12th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
ပါရာစီတမောကို ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသောက်လဲ? ဘယ်လောက်ပမာဏသောက်မလဲ? ပါရာစီတမော(acetaminophen)ကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဖျားနာသက်သာဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဖျားတဲ့နာတဲ့အခါမှာသောက်ကြလေ့ရှိပေမယ့် မည်သို့မည်ပုံသောက်ရမည်ကိုသေချာမကွဲပြားသလို၊မည်သည့်ပမာဏသောက်ရမလဲဆိုတာကိုလဲ ဂဃဏန မသိကြသူတွေရှိပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် ပါရာစီတမောကို ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသောက်မလဲ၊ဘယ်လောက်ပမာဏသောက်မလဲဆိုတာရှင်းလင်းသွားအောင်ပြောပြလိုက်ရပါတယ်။ ပါရာစီတမောကို ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသောက်လဲ??? ၁)ဖျားနာခြင်း။ -ပါရာစီတမောဟာ ရောဂါရင်းမြစ်ကိုမသက်သာစေနိုင်ပေမယ့် ရောဂါကြောင့်ဖြစ်သောဖျားနာခြင်းကိုတော့ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ၂)ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ -သာမန်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ဖျားနာ၍ခေါင်းကိုက်ခြင်းသာမက ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါမှာပါ ပါရာစီတမောကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၃)ကြွက်သားများနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း။ -အလွန်အမင်းမပြင်းထန်သော ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းများမှာ ပါရာစီတမောကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၄)အရိုးအဆစ်များနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း။ -အလယ်အလတ်ထက်မပိုသော အရိုးအဆစ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေမှာ ၎င်းကိုသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ၅)ဓမ္မတာလာစဉ် ကိုက်ခဲခြင်း။ -အမျိုးသမီးများ ရာသီလာစဉ်ကိုက်ခဲခြင်းကိုလဲသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ၆)ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖျားနာခြင်း။ -ကလေး/လူကြီးမရွေး ဖြစ်တတ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် ဖျားနာခြင်းကိုလဲသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပမာဏသောက်မလဲ??? ကိုက်ခဲဖျားနာခြင်းများအတွက်- က)လူကြီးများ။ -တစ်ရက်လျှင် ၅၀၀(သို့)၇၅၀ မီလီဂရမ်ကို (၆)နာရီခြားတစ်ကြိမ်သောက်နိုင်ပါတယ်။ -၂၄နာရီအတွင်း ၄၀၀၀မီလီဂရမ်ထက်